Madaxweyne Xasan oo la kulmay Gudoomiyaal gobol “Howlgal ayaa socda” – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Madaxweyne Xasan oo la kulmay Gudoomiyaal gobol “Howlgal ayaa socda”
Muqdisho, 10 Maarso 2014 – Madaxweynha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamud ayaa maanta kulan la qaatay qaar ka mid ah Guddoomiyeyaasha Gobolada Dalka.
Kulanka waxaa goob joog ahaa Wasiirka Arrimaha Gudaha iyo Federaalka Cabdullahi Godax Barre iyo mas’uuiliyiin ka socotay Wasaaradda Arrimaha Gudaha iyo Federaalka.
Guddoomiyeyaasha Gobollada waxaa ka mid ahaa Guddoomiyaha gobolka Banaadir, Xasan Maxamed Xuseen Muungab, Guddoomiyaha Galgadud Hussein Cali Weheliye (Cirfo), Guddoomiyaha Bay Cabdi Adam Hoosow, Guddoomiyaha Shabeellaha Dhexe, Cadi Jiinow Calasow iyo Guddoomiyaha Shabeelaha Hoose, Cabdulqadir Maxamed Nur (Siidii)
Madaxweynaha oo la hadlayey Guddoomiyeyaasha ayaa yiri “Waxaa socda Holwgal kooxaha nabad-diidka ah looga saarayo goobaha ay joogaan, si dadka deegaanka loo siiyo fursad loogu adeego oo ay kaalin mug leh ka qaataan dib u dhiska dalka, isla markaana maamulada gobolada looga baahanyahay inay la yimaadaan maamul wanaag, si dalka looga hirgeliyo doorashooyin xor ah.”
Madaxweyne Xasan ayaa u sheegay gudoomiyaasaha uu la kulmay “Qorsheyaasha dowladda ayaa ah in dib u eegis lagu sameeyo dastuurka, la dhaqangeliyo nidaamka Federaalka iyo in dalka laga hirgaliyo nidaamka dimoqraadiyada oo dadka deegaanka ay aayahooda ka tashadaan”.
“Si taas loo gaaro waa in maamulada Gobolada iyo Degmooyinka ay noqdaan kuwo u adeega bulshada, lana yimaada maamul wanaag. Sidoo kale goobaha laga saaro kooxaha nabad-diidka ah waa in si deg deg ah loogu gurmadaa shacabka oo loo helaa gar-gaar baini aadanimo iyo in loo helo adeegyada aasaasiga ah, si dadku u dareemaan faa’iidada dowladnimo iyo horumar.” ayuu sidoo kale madaxweyne Xasan ku yiri dhowrka gudoomiye gobo lee uu la kulmay.
Wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka C/llaahi Goodax Barre ayaa u sheegay warbaaahinta in waxyaabaha laga wada hadlay ay ahaayeen sidii loo mideyn lahaa howlagalada ciidan ee Alshabaab ka dhanka ah ee ka bilwoday gobollada qaar.
Madaxweynaha maamulka Puntland oo u ambabaxay Jamhuuriyadda Jabuuti
somalia leader tellSomalis: “This is the time to decide your destiny